Iholide enkulu kwizithombe ze-10 + - i-Geofumed
Iholide enkulu kwiifoto ze-10 +
Epreli, 2010 Uhambo
Ngento yonke nento ayifunayo, iholide lePasika yaphela. Andizi ukuba abantwana bam bakhumbula le mihambo efana nale, kodwa kwenzeke kum ukuba oko ndikukhumbulayo kakhulu kwiintsuku ubawo Wayekuloo mazwe, xa wandibuza ukuba ndilungiselele i-suitcase yami, ngezihlangu eziphezulu, eziye zaphumelela ukulwa neenyoka; Wandibuza ukuba ndigqoke i-cap shayilo ebunzini lam, ukukhusela ameva angonakalisi ubuso bam.
Lezo ziintsuku ezimangalisayo, kwandithatha ukuba ndihambe nganye kwimida yepropati ayeyilwa nayo yonke impilo yakhe, ndiyakwazi ukukhumbula indawo nganye ngamagama alandelayo:
Ukusuka kuleyo Quebracho siphosa esihlalweni, senza ikhefu ngendlu kaMnu. Virginia.
Ngoku siyakhwela lo mcingo uphila, kuwo wonke umgca wePie-deer ...
Ukunyuka kwesi sikhephe, sifika kwingqungquthela yentaba yaseZatoca, sihlasela nepropati yakwa-Avilio.
Uhambo lwam olungafani nanye, andiyiphindaphindi ixesha elifanayo okanye ixesha lonyaka. I-intanethi kunye ne-Facebook ndifundise ukuba ayiphilisanga, ayikhuselekile, kwaye kufuneka ibaleke kamva ukukhusela iziganeko ezimbi.
Apha ndishiya iifoto ezibalulekileyo zolu luhambo, oluphelile.
Kwiimithombo ezitshisayo, impompo iyamanzi abilayo kwi-Luna Jaguar Spa, edibaniswe nomoya obanda kakhulu womlambo umnandi kakhulu.
Nantsi i-18 Rabbit kucamngca ngeendlela ze-300 zokuphucula i-calligraphy yakho.
Abafana abanentloko abachazi-mthetho bathi abakwazi ukufumana apho wayekho. Ngokufaniswa kwamanani asePersi, ngokuqinisekileyo umntu wamlethela kwelinye icala ukuba athabathe oko ashiye izinwele.
Usuku olungileyo, ubungqina bendlela abayilungiselela ngayo iimpapu ze-sawdust, ekuseni bagqiba. Ukufikelela kwiiyure zokusebenza ze-16, eziphela kumzuzu we-15 we-Holy Holy procession.
Ukungaphumeleli umkhwa, baba intlanzi ezinjengeeyure ezintathu zelanga elikhanyayo.
UThixo, ndisindise a baxoxani ngamantombazana ...
Ukuze ubuchule bube buchule ukwenza i-loop kunye neNkoyi yeSwitch ukuya kwilungu. (kule ndawo, ukudibanisa i-zope kuthiwa isenzo esiqhelekileyo sokuhlanza)
Kwimifanekiso yeTempile yaseRosalila, kwiMyuziyam yaseCopán Ruinas.
Apha, kwindawo yendawo. Kwenzeka ukuba ezi IiMeya Bakha idolophini phezu komzi, ukusibekela ubungangamsha bomlawuli wangaphambili, kunye nokukwazi into ethile, kufuneka kubekho imigudu apho umntu angazibona khona izixeko ezingcwatyelweyo. Ifa elilizuze ifa kwizombusazwe, ezenza okufanayo kwinguqu ephosakeleyo.
Ukutya ... akukho nto inokukhathazeka ngayo.
Ngaphandle kwam i-cholesterol yam.
Ngaphambili, ezinye zihambelanisiwe, phakathi kwendawo yokucima kunye nasemva, intombi yam ikhupha kwii-tacos ezivela kwiZotlo zeZots.
Abafanayo bawakhulula iyure emva kwendlela.
Fort San Cristóbal, ekuhambeni kokubuya
Ukuzinikela ngokukhethekileyo kumhlobo wam wase Houston.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ngoku, ukufaka WordPress
Post Next Imephu yezobupolitikaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 "Iholide enkulu kwizithombe ze-10 +"
Molo Boby. IFort San Cristóbal, ikwidolophu ebizwa ngokuba yiGracias, eHonduras.
Iifoto ezintle kakhulu kunye namazwana njengamaxesha onke!
Ndiyabingelela kwaye ndiyathemba ukuba iiholide zilungile!
Izikhefu ezigqwesileyo, enye xa lo mncinane engazi ukuba uyayixabisa njani ... ngendlela enqwenela ngayo iSan Cristobla?